Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Hilton dia manokatra trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra any Azia Pasifika
Hilton, iray amin'ireo orinasam-pandraisana vahiny mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao, dia hanomboka ny trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra any Azia Pasifika miaraka amin'ny fanokafana ny efitrano 1,080. Hilton Singapore Orchard tamin'ny Janoary 2022.
Misokatra ho an'ny famandrihana izao, ny hotely dia hivoaka voalohany ao afovoan-tanànan'i Singapore Orchard Road ary hisolo tena ny fisian'ny Hilton ao amin'ny firenena taorian'ny fanavaozana lehibe. Fiovam-po avy amin'ny Mandarin Orchard Singapore ankehitriny, Hilton Singapore Orchard dia an'ny OUE Limited ary hotantanan'i Hilton.
Paul Hutton, filoha lefitry ny asa, Azia Atsimo Atsinanana, Hilton, dia nilaza hoe:“Amin'ny maha ivon-tanàna sy tanàn-dehibe lehibe ho an'ny mpandeha an-tongotra sy ny fialam-boly, dia manantena ny fitomboan'ny sehatry ny fandraisana vahiny ao Singapore izahay rehefa manomboka ny fanarenana ary mitohy ny dia mandritra ny fotoana maharitra. Faly izahay hanomboka taona vaovao miaraka amin'ny fanombohana fanampim-panazavana lehibe ho an'ny portfolio-paritra amin'ny alàlan'ny fanokafana ny Hilton Singapore Orchard, izay hisolo tena ny hotely Hilton iray tena manan-danja ao amin'ny tanàna vavahady manan-danja ho an'i Azia Atsimo Atsinanana, ary miandrandra hanohizana ny fanomezana ny ambaratonga malaza amin'ny fampiantranoana Hilton ho an'izay rehetra mandalo eo am-baravaran'ny hotely.”
Araka ny toetran'ny toerana stratejika sy ny fitaovana ary ny kojakoja midadasika, ny Hilton Singapore Orchard vaovao no ivon-toerana tonga lafatra ho an'ny fandraharahana sy ny fialam-boly. Antsasak'adiny monja avy eo amin'ny seranam-piaramanidin'i Singapore Changi, dia afaka manantena fijanonana ao anatin'ny iray amin'ireo toerana tiana indrindra ao an-tanàna ny mpandeha ary mankafy ny fidirana amin'ny traikefa tsy manam-paharoa azo avy amin'ny fifangaroan'ny sakafo iraisam-pirenena, ny lamaody ary ny endrika ary ny karazana. ny toeram-pivarotana antsinjarany. Ny vahiny mandeha amin'ny tanjona ara-pitsaboana dia hankasitraka ny akaiky ny tobim-pitsaboana manam-pahaizana voalohany eo am-baravarany.
Miaraka amin'ny efitrano sy suite 1,080 nohavaozina manerana ny tilikambo roa, ny Hilton Singapore Orchard dia ho iray amin'ireo hotely lehibe indrindra any Singapore. Ny vahiny dia afaka miditra amin'ny sokajy isan-karazany amin'ny efitrano sy suite, raha ireo izay mandeha miaraka amin'ny fianakaviana sy ny olon-tiany dia afaka misafidy ny hamandrika ny efitrano mampifandray ny hotely izay azo voamarina avy hatrany amin'ny fotoana famandrihana. Ny trano fandraisam-bahiny dia manana toerana tsara ho an'ny fizarana fitsangatsanganana isan-karazany, manomboka amin'ny fialam-boly ka hatramin'ny mpandeha ara-barotra sy orinasa mankany amin'ny vondrona lehibe.
FAMPIANARANA SY SERVIS DAHOLO
Ny vahiny dia hankafy kojakoja sy serivisy isan-karazany ao anatin'ilay hotely, anisan'izany ny foibe ara-pahasalamana roa 24 ora feno fitaovana, dobo an-kalamanjana, Executive Lounge vao naorina ary fifandraisana mivantana amin'ny trano fivarotana lafo vidy misy rihana efatra miaraka amina toeram-pivarotana eo an-toerana sy iraisam-pirenena. marika lamaody sy trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana.
FIAINANA CULINARY VAOVAO
Natao ho toeram-pisakafoana ho azy manokana, ny Hilton Singapore Orchard dia manandratra bebe kokoa ny sehatry ny sakafo ao an-tanàna miaraka amin'ny foto-pisakafoanana dimy voalamina ao anatin'izany ny Chatterbox nahazo loka, Shisen Hanten manana kintana Michelin roa ary fanatitra sakafo sy zava-pisotro telo vaovao manasongadina sakafo mandritra ny andro. , trano fisakafoanana manokana ary efitrano fandraisam-bahiny sy bar.
FIVORIANA SY HETSIKA
Miaraka amin'ny habaka hetsika 16 nohavaozina fatratra sy maro isan-karazany mirefy 2,400 metatra toradroa mahery, ny hotely dia ho afaka handraisana fivoriana sy hetsika manomboka amin'ny fivoriambe sy fampirantiana ka hatramin'ny fampakaram-bady sy lanonana ara-tsosialy. Manolotra iray amin'ireo toerana lehibe indrindra ao an-tanàna, Hilton Singapore Orchard dia hanasongadina efitrano fandraisam-bahiny roa tsy manam-paharoa sy tsy misy andry misy rindrina LED manara-penitra, jiro ary teknolojian'ny fanamafisam-peo izay mahazaka vahiny 1,000 ary natokana ho an'ny pre- faritra miasa. Ho an'ny fivoriana kely kokoa, ny mpanentana dia afaka misafidy amin'ny efitrano fiasana 12, ny ankamaroan'izy ireo dia mandray ny hazavan'ny andro voajanahary, ary toerana be aingam-panahy manodidina ny hotely ho an'ny fiatoana kafe manokana sy fotoam-pisakafoanana.
Cedric Nubul, tale jeneralin'ny Hilton Singapore Orchard dia nilaza, “Hilton Singapore Orchard dia ho iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny andrasana indrindra hisokatra amin'ny 2022 ary fanampim-panampiana mampientanentana amin'ny sehatra mavitrika ao amin'ny Orchard Road. Miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny 1,080 voatendry tsara, iray amin'ireo toerana lehibe indrindra amin'ny hetsika ao amin'ny faritra, foto-pisakafoanana dimy voalamina ary toerana afovoany eo afovoan'ny toeram-pivarotana sy toeram-pisakafoanana any Singapore, ny hotely dia natao ho toerana isafidianana ho an'ny orinasa sy mpivahiny miala voly, ary koa ireo monina eto.”